UPDATE +VIDEO: Bukaannada ka bogsoonaya Cudurka Covid-19 oo kordhay & 1455 oo la diiwangeliyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE +VIDEO: Bukaannada ka bogsoonaya Cudurka Covid-19 oo kordhay & 1455 oo...
UPDATE +VIDEO: Bukaannada ka bogsoonaya Cudurka Covid-19 oo kordhay & 1455 oo la diiwangeliyay
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada XFS, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee COVID19 ku xaqiijisay in 24-kii saac ee ugu dambeeyay ay xanuunka Karoona ka bogsooseen 11 qofood.
Bukaannada jirkooda laga waayay Feyruska ayaa tirada guud ee dadka bogsooday ka dhigaya 163 oo ka dhigan inay xanuunka ka reysteen in ka badan 11% dadkii uu xanuunku haleelay.
Wasiirka Caafimaadka ayaa sidoo kale caddeysay in la diiwaan geliyay 34 xaaladood oo kala jooga Somaliland 18 gobalka Banaadir 14, iyo dowlad gobaleedka Hishabeelle 2. Xaaladaha cusub 21 kamid ah waa rag, 13 kalana waa haween. 1,455 xaaladood oo COVID-19 ah ayaa guud ahaan dalka laga diiwaan geliyay.
Hal ruux ayaa u geeriyooday COVID19, waxaana tidara guud ee geeridu noqotay 57.
Wasiirka Caafimaadka, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa ku baaqday in midnimo looga qayb qaato xakameynta faafitaanka Feyruska Karoona si guul ay ugu dhamaadaan qorshayaasha dowladdu ay ku dooneyso in cudurka looga guuleysto.